Xakamaynta softiweerka lagu rakibay Debian iyo derisyada | Laga soo bilaabo Linux
Xakamaynta softiweerka lagu rakibay Debian iyo noocyada kala duwan
Tesla | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Dhammaantiin waad salaaman tihiin!
Sababta qoraalkan ayaa ah in la soo bandhigo talo yar oo ku saabsan kuwa sida aadka ah ugu taxaddara rakibidda ama ka saarista software nidaamkaaga. Qaybinta sida Debian iyo waxyaabaha laga helo (Ubuntu, Linux Mint, aasaasiga, ...), yaa isticmaala runtii, waxaa jira fayl la socda wax kasta oo la rakibo ama laga saaro kuweenna PC. Waana taas tan aan maanta isku dayeyno inaan soo bandhigno.
Had iyo jeer way dhacdaa inaan rakibno software taasi waa inoo anfacaysaa mar uun iyo hadhow waxaan rabnaa inaan baabi'ino. Waan sameyn karnaa (marka laga reebo adeegsiga barnaamijyada garaafka ah) iyadoo la raacayo amarka:
Doorashada nadiifin sidoo kale wuxuu nadiifiyaa goobaha barnaamijka. Waa ikhtiyaari laakiin kiiskeyga marwalba waan isticmaalaa.
Tan waxaan ku tirtirnaa barnaamijka su'aasha iyo, haddii ay xaaladdu tahay, runtii wuxuu na ogeysiinayaa inay jiraan baakado aan loo baahnayn oo waxaan ku saari karnaa amarka:
Sidaad horeyba u ogayd, labadan talaabo ee fudud waxaan ku baabi'inaynaa dalabka iyo ku tiirsanaantiisa. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xaalado aan wax aan rakibnay aysan u soo bixin ku-tiirsanaan toos ah ama runtii go'aansaday in uusan tirtirin. Sababta Su’aal wanaagsan! In kasta oo aan haysto aragtiyahayga, haddana ma joogo meel aan ku dejiyo jawaab lagu qanco.
Aniga oo aan sii socon, maanta waxaan sameeyay rakibidii (gudaha Linux Mint) ee reexaanta-meta-xfce4 in la sameeyo xoogaa tijaabo ah kadibna la tirtiro xirmadan (iyo wixii aan ku saari lahaa Maqnaanshaha autoremove), Waxaan awooday inaan u fiirsado in wax kasta oo aan dhigay dhowr saacadood kahor in la tirtirayo. Marka, sida ku jirta GNU / Linux waxaan haynaa feylasha cajiibka ah qorka, Waxaan helay mid si buuxda gacanta ugu haya wax kasta oo rakibay ama laga saaray nidaamka. Si aad u aragto feylkaan, kaliya ka fur terminal (ama si toos ah faylka baaraha) oo gal:
Oo waxaan heli doonaa soo saar shaashad ah oo kan oo kale ah:
Muunad ka kooban waxyaabaha ku jira faylka aaladda taariikhda .log.
Sida aad u arki karto, tan faylka dhammaan howlaha rakibaadda ama rakibaadda ayaa ka muuqda. Sidan oo kale, kuwa idinka mid ah ee leh dhibaatooyin xagga booska ah iyo / ama jecel inay haystaan ​​xirmooyinka ugu yar ee lagama maarmaanka ah (oo inta badan xuduud la leh TOC) waxaad ka qaadi kartaa xakameyn buuxda runtii.
Fudud oo hal xariiq amar ah annaga!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Xakamaynta softiweerka lagu rakibay Debian iyo noocyada kala duwan
Amarka "sudo apt-get remove –purge" miyaanay la mid ahayn sameynta "sudo apt-get purge"? Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaad u isticmaali laheyd –purge-ka «sudo autoremove –purge» halkaasna waxaad ku hubin jirtay inaad wax kasta oo nadiif ah ka tagto.
Jidka dariiqa cusub waxaan u maleynayaa inuu noqon doono "sudo apt purge" ¿?
Sephiroth, waxaan ku cusubahay Linux. Maan fahmin waxaad dhahdo dhamaadka. Marka si loo bixiyo amar kasta, muhiim ma aha in la qoro "sudo apt-get ..." oo leh sudo apt ____ "ma ku filan tahay?
Ku jawaab Kaletivo
Sephiroth waxaa loola jeedaa nooca cusub ee apt. Xilligan la joogo, inta aan ogahay, cidina ma saarin nooca cusub. Ugu yaraan Linux Mint maahan.
Waxaad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan balooggan: https://blog.desdelinux.net/apt-llega-a-su-version-1-0-con-barra-de-progreso-al-instalar-paquetes/
qalabka cusub ayaa laga heli karaa ubuntu 14.04 waxaanan u maleynayaa in tijaabada debian sidoo kale
Xaqiiqdii, waxay umuuqataa in nooca 1.0.1 laga heli karo tijaabada Debian. Xitaa sidaas oo ay tahay, Xubuntu 14.04 ee aan ugu rakibay qof qaraabo ah waxaan u maleynayaa inaysan meesha oollin maxaa yeelay ma aanan arkin isbeddel ku yimaadda. Xaqiiqdii, waan cusbooneysiiyay sida caadiga ah: apt-get update && apt-get upgrade.
Qarsoodiga nolosha ama waxaa laga yaabaa in cusbooneysiin weli la dhigo.
Sidaan u sheegay @ Argen77ino waxaan amarkaas u adeegsadaa dhaqan ahaan. Dhamaadka cusboonaysiinta kasta ama ka saarista marwalba waxaan sameeyaa:
sudo apt-nadiifi && sudo apt-get autoclean
Tan waxaad ku tirtirtaa faylasha la soo dejiyey, adigoo sii deynaya booska diskka. Xidhiidhka internetka ee degdega ah waxaan u maleynayaa inay fikrad fiican tahay, maadaama aysan wax qiimo ah ku fadhiyin inaad soo dejiso xirmooyinka markale.
Ha iloobin Gentoo.
In / var / db / pkg / waxaad ka heli kartaa gabi ahaanba keydka xogta qaybaha, ka dibna xirmooyinka sida loo soo uruuriyay, waqtiga. Muxuu genlop isticmaalaa
Iyo in /var/log/portage/elog/summary.log waa kuwa farriimaha aad u muhiimka ah ee aan dhihi lahaa waa qasab in la akhriyo.
Tani waa dhammaadka kooban ee kooban, haddii ay dhacdo inuu qof ku caawin doono.
Ogeysiis aad ufiican!
Kumaan darin maxaa yeelay marwalba waan isticmaali jiray Debian (iyo derivatives) iyo Arch Linux (iyo derivatives). Waa inaan ku rakibaa Gentoo saaxiibkay oo aan ku diyaariyaa kombuyuutar aan ahayn kan ugu weyn.
Waad ku mahadsan tahay macluumaadka!
Talooyin aad ufiican kuwa raba inay ogaadaan wax kasta oo ku dhaca nidaamkooda aniga oo kale.
Waxaan u maleynayaa in noocyadii hore ee apt haddii aad isticmaashay –purge iyo sabab la yaab leh qof walba uu u diido isbedelka. Sikastaba waa isku mid. Waxay horeyba uyaqaaneen midabada dhadhanka.
Runtu waxay tahay in laga yaabo inay jirto ikhtiyaar ka fiican, laakiin marwalba waan isticmaali jiray midkaas. Sidaad u tidhi, waxa ugu ammaansan ayaa ah inay dhaqan ahaan tahay.
Su'aal isku xiran. Si loo gaaro natiijo la mid ah tan lagu helay: # apt-get –purge autoremove [pack-name] Sidee ayaynu u isticmaali karnaa Pacman ama Zypper? . Mahadsanid.
Qof baa i sixi doona haddii kale.
Markii aan isticmaali jiray Arch Linux dhowr sano ka hor waxaan u maleynayaa inaan adeegsan jiray amarka:
sudo pacman -Rsn packagename
Haddii aan si sax ah u xasuusto:
"R" ayaa tirtiray xirmadii su'aasha ahayd, "s" ayaa tirtiray ku tiirsanaanteedii iyo "n" faylalka qaabeynta.
In Zypper ama YUM wax fikrad ah maleh, maadaama aanan waligey isticmaalin.
Macluumaad aad ufiican… Mahadsanidiin .. Salaan
Waan ku faraxsanahay inay waxtar leedahay!
Tallaabada xigta waxay noqoneysaa in laga tirtiro xirmooyinka aan helnay ee la rakibay laakiin aan la furin?
Ku jawaab carlosO
Faylkaas wuxuu liis garayaa wax kasta oo la rakibey lana amro taariikhda. Haddii aad hesho wax aadan rabin inaad hesho, mid fudud:
apt-hel ka saar packagename
Waxaan isku dayayaa inaan arko waxa aan helayo
Mahadsanid, waxay noqon doontaa mid waxtar leh 🙂
Taasi waa mid xiiso leh, laakiin aniga sabab kale, mararka qaar waxaan rakibaa waxyaabo badan oo aanan sii ogeyn in xD ay rakibayso.
Laakiin waxaad sheegtey in apt-get mararka qaarkood uusan dooneynin inuu tirtiro xirmooyinka, aniga igama dhaceyso aniga maxaa yeelay dhab ahaantii waxa aan isticmaalo waa karti. (Labadaba si loo rakibo oo loo tirtiro.)
eee maxaa yeelay waxay leedahay waxaan isticmaalaa chrome !!! Chromium waa waxa aan haysto, xitaa ma aqaano sababta aan u adeegsanayo… .. bogagga nacaladda leh ee u baahan nooca ugu dambeeya ee flash….
Soo Celiyaha Mawduuca Caadiga ah: U noqoshada interface-ka caadiga ah ee Firefox